Ikwenye N 39 Ọnụ Ụzọ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ikwenye N 39 Ọnụ Ụzọ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ikwenye N 39 Ọnụ Ụzọ)
N'ọnọdụ ime ụlọ ahụ dị elu na-agba ọsọ na-eme ọsịsọ
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ ọsọ PVC na-adịwanye mkpa na ndụ nke oge a, Thesọ ọsọ ọsọ azụmaahịa chọrọ ọnụ ụzọ dịka ọnụ ụzọ ngwa ngwa iji gboo ngwa ọrụ na mkpa nkwakọba ihe niile. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama...
Mee Egwuregwu n'agba akwa akwa
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ dị elu, Mgbe ụfọdụ anyị na-akpọ ya PVC ụzọ dị elu ma ọ bụ ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ, bụ ụdị ọnụ ụzọ eji akwa ụlọ ọrụ, alumini, igwe anaghị agba agba, igbe njikwa na sistem servo. Ọnụ ụzọ dị elu nwere ogologo ndụ ogologo oge karịa MILLION uasge, Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka ebe a na-adọba ụgbọala,...
N'ogbe Onu ogugu Anyi Mkpo Osa CE ROHS
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Dịka usoro iji meziwanye arụmọrụ dị mma, imeghe ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ndụ kwa ụbọchị. Oke ọnụ ụzọ na-erite ọtụtụ abaghị uru dịka, mepee / gbanyụọ ihe karịrị 1m / s, ogologo ndụ dị elu karịa oge 1 nde. HongFa bụ onye nrụpụta akọwapụtara na ọnụ ụzọ spped elu ihe karịrị afọ iri abụọ...
Ulo onu a na-achogharighi aka n'oru a na-achikota oru
Ulo onu a na-achogharighi aka n'oru a na-achikota oru Ụlọ ọrụ eletriki na- arụ ọrụ bụ ụzọ nwere ike ịkwaga ma gbanwee onwe ya iji chịkwaa ọnụ ụzọ meghere ụzọ iji chịkwaa ntanetịtị na ntọhapụ nke ndị na-eme njem ma ọ bụ ugbo. Ọnụ ụzọ telescopic bụ nke a na-agụnye akụkụ ahụ, otu ụgbọala na-akwọ ụgbọala, okporo ụzọ...
Ikwenye N 39 Ọnụ Ụzọ Ikwenye n'Ọnụ Ụzọ Mepee Ọnụ Ụzọ Nwee Mgbidi n'Ọnụ Ụzọ Nyefee n'Ọnụ Ụzọ Ikwuputa Uwe n'Ọnụ Ụzọ Bulie Ọnụ Ụzọ PVC Lee Site n'Ọnụ Ụzọ